Amanada Gorman: Had iyo jeer iftiin ayaa jira haddi aan geesinimo u leenahay inaan aragno… – Hagaag.com
Posted on 21 Janaayo 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Jaakadeedii jaallaha ah iyo timaheeda oo ay ku soo xiratay taaj casaan ah; Amanda Gorman ayaa waxay si weyn u soo jiitay muuqaalka intii lagu guda jiray caleema saarka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii, markii gabyaagan yar ay tirisay gabay ay qortay oo ay ugu baaqeyso muwaadiniinteeda inay midoobaan, iyadoo soo jiidatay qaluubta dadkii ku sugnaa jaranjarada Capitol iyo dadkii ka daawanayey shaashadaha television-ada.
Gorman oo jirta 22 sano oo kaliya kana soo jeeda magaalada Los Angeles, waxay masraxa ka tirisey gabay magaciisu ahaa “The Hill We Climb”, iyada oo ula jeeda “Capitol Hill,” xarunta kongareeska oo ay ku xoomeen dad badan oo taageersan madaxweynihii hore Donald Trump bishii Janaayo 6dii.
Gabayga oo iyada qortay ka dib weerarka dhiigga badan ku daatay oo ay ku dhinteen 5 qof kaasi oo naxdin ku reebay Mareykanka iyo adduunka – Gorman waxay ka hadashay “xoog ku kala kaxayn ama burburinta ummaddeena intii aan isla wadaagi lahayn,” iyadoo raacisay, “Dadaalkani wuxuu ku dhowaaday inuu guuleysto, laakiin haddii dimuqraadiyadda mararka qaarkood ay luudo, Mar walba macquul maahan in laga adkaado.
Gabadhan yari waxay soo jiitay dhagaystayaasha codkeeda oo dagan iyo dhaqdhaqaaqyada raaxada leh ee faraheeda, waxayna gabaygeedu tirisay iyadoo ka muuqata kalsooni sare, kadib markay ka aragtay qorista gabayga inuu yahay hab looga adkaado dhibaatada ay la soo kulantay yaraanteedii, si la mid ah sidii Biden uu sameeyay markuu yaraa.
Bilowgii gabaygeeda, abwaanaddu waxay isku sifeysay “gabadh madow oo caato ah, oo ka soo farcantay addoomo, oo ay korisay hooyo keligeed ah. Waxay ku riyoon kartaa inay madaxweyne noqoto, kaliya waxay is arki kartaa iyada oo madaxweyne ka hor tirisa gabay.”
Gorman ayaa waxay ku guuleystey abaalmarinteedii gabay ee ugu horeysay iyadoo weli 16 jir ah, 3 sano ka hor uun bay ahayd markii ay ku guuleysatey abaalmarinta “Gabdha ugu da’da yar ee gabyaaga ah ee dalka”, markaasi oo ay baraneysay cilmiga bulshada ee jaamacadda caanka ah ee Harvard.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, Marwada Koowaad Jill Biden ayaa aheyd qofkii u soo jeediyay qabanqaabiyeyaasha xafladda magaca Gorman, ka dib markii ay ka qeybgashay mid ka mid ah soo bandhigida gabayadeeda.
Bishii December ee la soo dhaafay, qabanqaabiyayaashu waxay ka codsadeen inay soo qorto gabay loogu talagalay midowga Ameerika, iyada oo la ilaalinayo ujeedada hadalka Biden. Runtii, abwaanada da’da yar ayaa qaadatay masuuliyadeeda, kadib waxay qortay “Waxaan u rogi doonnaa dunidan dhaawaca ah adduun kale oo cajiib ah, ayay qortay. “Had iyo jeer iftiin ayaa jira, haddii aan kaliya geesinimo u leenahay inaan aragno, haddii aan kaliya leenahay geesinimo ku filan inaan noqonno,” ayay raacisay.
Kadib xaflada caleema saarka Biden iyo Harris, buugaagta Amanda Gorman ayaa waxay noqdeen kuwa ugu iibsiga badan Amazon, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska The Independent.
“Buugaagtaydu waa kuwa ugu horreeya iyo kuwa labaad ee Amazon maalin kadib!” Gorman ayaa sidaasi ku qortay Twitter-ka, iyadoo raacisay “Aad baad ugu mahadsan tihiin kuligiina taageeradiina iyo taageerada ereyadayda.”
Tirada taageerayaasha Gorman ee Twitter-ka ayaa kor u booday boqolaal kun, saacado yar ka dib markii ay tirisay gabaygeeda; Ka dib markii ay lahayd oo keliya 189,000 oo taabacsan ka hor caleemo-saarka, waxay hadda ku leedahay in ka badan milyan taageerayaal barta bulshada.
Aqrinta gabayga Gorman waxaa amaanay dhowr siyaasiyiin caan ah iyo shaqsiyaad caan ah xafladii caleemo saarka, waxaa ka mid ah Hillary Clinton ayaa iyaduna ku soo biirtay iyada oo barteeda Twitter-ka ku soo qortay “Miyuusan ahayn @TheAmandaGorman gabaygu mid la yaab leh? Waxaan balan qaaday in aan u tartamayo xilka madaxweynaha sanadka 2036, shaqsiyanna ma sugi karo.
“Gabaygu inta badan wuxuu taabtaa in aan dib ugu laabano markay tahay inaan is xasuusino taariikhda aan ku taaganahay, iyo mustaqbalka aan u taaganahay inaan difaacno,” ayey tiri Gorman.
Amanda Gorman ayaa ugu sarreysa barta Twitter-ka qoraallo ay ka mid yihiin dabaaldegyo ballaaran oo iyada loo sameynayo, magaceeda Ingiriisiga ah “AmandaGorman” ayaa ugu caansan adduunka isla bartaasi, iyadoo dadka isticmaala Twitter-ka aad ugu riyaaqeen gabaygeeda, waxayna aragtay in ay gabaygeeda ku soo bandhigtay aragti rajo leh oo ku saabsan waddan dhawaanahan la xanuunsanaa kala qaybsanaan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama wuxuu ku yiri – qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka – waa maalin taariikhdu ay xuseyso oo Amanda Gorman ay tirisay gabay ku habboon xilligaasi, dhalinyarada iyada oo kale ah waxay caddeyn u yihiin in iftiinku had iyo jeer joogo, kaliya haddii aan dhiirran nahay inaan aragno, oo aan noqonno.